रकेटम्यान- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
फिल्म कहिल्यै कुनै अवार्डमा उत्कृष्ट नहुने, व्यक्तिगत रुपमा पनि कहिल्यै उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड नपाउने, समीक्षकले कहिल्यै तारिफ नगर्ने, नाच्न र अभिनयमा खासै अब्बल नभएका सलमान खान बक्सअफिसमा कसरी ॅकिङ मेकर’ बनिरहेका छन् ? के तत्वले उनलाई लोकप्रिय अभिनेता बनाएको छ ? कोही किन उनका जबरजस्त फ्यान बन्न तयार छन् ? सलमान सबैका लागि रहस्यमयी र शक्तिशाली सुपरस्टार हुन्  । उनको फिल्मी कमाइ सूत्रबारे सुशील पौडेल लेख्छन् :
सलमान खान नाच्न खासै जान्दैनन् । अभिनय त उनको कामचलाउ मात्रै हो । नत्र ३० वर्षको फिल्मी करिअरमा पहिलो फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ बाट डेब्यु हिरोको फिल्मफेयर जितेका उनले त्यसपछि अभिनेताका रुपमा कुनै पनि अवार्ड जितेका छैनन् । भारतीय समीक्षक मयंक शेखरले त एकपटक कटाक्ष गर्दै भनिदिए, ‘सलमानका फिल्मको समीक्षा गर्नु र अन्डरवेयरमा आइरन लगाउनु उस्तै हो । दुवै बेकाम ।’
सलमानका फिल्मको बक्सअफिस रिपोर्ट भने माथिका तर्कसँग कुनै तारतम्य राख्दैनन् । कम्तीमा भारु. एक करोड कमाउने ‘करोड क्लब’ प्रवेश अन्य कलाकारका लागि ठूलो उपलब्धि हुने गर्छ, तर उनको दौड करोड कटेपछि मात्र सुरू हुन्छ । फोर्ब्सले गत वर्ष निकालेको विश्वका ‘सर्वाधिक पारिश्रमिक पाउने सेलेब्रिटी’ मा सलमान ३ करोड ७७ लाख डलर कमाइसहित भारतका पहिलो र विश्वको ८२ औं स्थानमा अटाएका थिए । सर्वाधिक कमाइ गर्ने भारतीय फिल्ममा आमिरको ‘दंगल’ र प्रभासको ‘बाहुबली २’ पछि उनकै फिल्म ‘बजरंगी भाइजान’ पर्छ ।
सन् १९८९ को डेब्यु फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ बाटै उक्त वर्षको सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्म दिन सफल सलमानका त्यसपछि साजन (१९९१), हम आपके है कौन (१९९४), हम साथ साथ हैं (१९९९), नो इन्ट्री (२००५), दबंग (२०१०), बडिगार्ड (२०११), एक था टाइगर (२०१२), बजरंगी भाइजान (२०१५) र टाइगर जिन्दा है (२०१७) का घरेलु बक्सअफिसमा त्यस वर्षका सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्म बने । सर्वकालीन चर्चित दस फिल्मको सूचीमा सलमानका तीन फिल्म पर्नुले उनको बक्सअफिस शक्तिलाई झल्काउँछ । यतिबेला उनकै फिल्म ‘भारत’ ले पाँच दिनमै भारु. डेढ सय करोड संकलन गरिसकेको छ । उनको फिल्मको कमाइका कारण :
५३ वर्षीय सलमानको व्यक्तित्व उँचो छ । पटकथाकार सलिम खानका छोरा सलमान फिल्ममा मात्रै अभिनेताको भूमिका खेल्दैनन्, बरु सामाजिक रूपमा पनि आफूलाई नायक साबित गर्ने काममा लागिपर्छन् । विइङ ह्युमन फाउन्डेसनमार्फत गरिब तथा बालबच्चाका लागि सहयोगी बन्दै आएका उनी बलिउडमा धेरैका गडफादरसमेत हुन् । प्रायः कालो पहिरनमा हिंड्न रुचाउने सलमान सुगठित शरीरका कारण पनि लोकप्रिय छन् । आफू कपडा लगाउँदा भन्दा ‘टपलेस’ मा बढी सहज अनुभव गर्ने बताउने उनले फिल्म ‘प्यार किया तो डरना क्या’ को गीत ‘ओ ओ जाने जाना’ मा पहिलो पटक टपलेस भई देखिएका थिए । उनको उक्त अवतारलाई यति रुचाइयो कि त्यसपछि सलमानले हरेकजसो फिल्ममा बडी देखाउने बहाना पाए ।
सलमान अभिनयका अलावा चित्रकला, गायन र खाना पकाउनमा विशेष रुचि राख्छन् । सलमानको डान्सको सिग्नेचर स्टेप उनकै पूर्वप्रेमिका संगीता बिजलानीले सिकाएकी थिइन् ।सलमान हतपती सेल्फी खिच्न रुचाउँदैनन् । उनीसँग खिचेकै सेल्फी देखाएर एक युवतीले गर्लफ्रेन्ड दाबी गरेर हंगामा गरेकी थिइन् भने अर्का एक युवकले आफू सलमानको कास्टिङ एजेन्ट बताएर दुरुपयोग गरेका थिए ।
बलिउडमा सलमान, शाहरूख र आमिर गरी तीन खानमा को ठूलो भन्ने बहस चर्को छ । फ्यानहरूबीच यसै विषयलाई लिएर दन्तबझान चलिरहन्छ । तर सलमान आफ्ना फ्यानलाई यस्ता बहसमा लागेर समय र ऊर्जा खेर नफाल्न सल्लाह दिन्छन् । उनी आफूलाई सधैं दर्शकको माया भए पुग्ने बताउँछन् । सलमान मोहम्मद रफी, किशोर कुमारलगायतका गीत सुन्न बढी रुचाउँछन् । एकपटक उनले आफ्नो रुचिका गीतमा ‘चुरालिया है’ र ‘मेरे सपनोकी रानी’ भनी उल्लेख मात्र के गरेका थिए, फ्यानले ती गीतलाई एकाएक ट्रेन्डिङमा ल्याइदिए ।
सलमान कुनै बेला ‘ब्याड ब्वई’ का रूपमा बढी चिनिन्थे । खासगरी अभिनेत्री ऐश्वर्या रायसँगको उनको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर हुन छोडेपछि सलमान आक्रामक बनेका थिए । स्वयं ऐश्वर्याले सलमानविरुद्ध सुरक्षाको कारण देखाउँदै उजुरी दिएकी थिइन् । पछि ऐश जुन युवकसँग नजिक हुन्थिनँ, उसलाई समेत सलमानले तनाव दिन छोड्दैनथे ।
तिनै सलमानपछि युवतीका मामिलामा भलाद्मी निस्किए । यतिसम्म कि उनी फिल्ममा को–एक्टरसँग किस सिनसमेत राख्दैनन् भने नायिकालाई भड्किलो पोसाकमा खेल्न पनि दिँदैनन् । धेरैलाई नायिका बनाएको श्रेय पनि सलमानलाई नै जान्छ । बलिउडमा कसैलाई आपतविपत पर्दा सबैभन्दा पहिले सहयोगी हात सलमानकै हुन्छ । आफ्नो
आचरण एकाएक बदलेका सलमानलाई यही कारण पनि सबैले रुचाउँछन्, डराउँछन् पनि । उनी फिल्मी चरित्रले भन्दा आफ्नै चरित्रका कारण बढी प्रसिद्ध छन् र त उनका फिल्ममा उनलाई मात्रै हेर्न भए पनि फ्यान हलसम्म पुग्ने गर्छन् ।
सलमानले लोकप्रियता पाउनुमा उनीप्रतिको सहानुभूति पनि हो । सडक पेटीमा सुतिरहेकाहरूमाथि रक्सी पिएर सवारी चलाई भागेको ‘हिट एन्ड रन’ काण्ड र कालो हरिणको अवैध सिकार गरेको आरोप खेपिरहेकाले उनी सामाजिक रूपमा अलोकप्रिय हुनुपर्ने हो । तर यही मुद्दाका कारण उनले फ्यानबाट सहानुभूति बटुले । उनलाई निर्दोष साबित बनाउनका लागि व्रत बस्नेदेखि धर्ना दिएर दबाब दिने ठूलै पंक्ति छ ।
सलमानका फ्यान बच्चादेखि वृद्धसम्म छन् । उनका फिल्म ‘बिग स्क्रिन’ देखि ‘सिंगल स्क्रिन’ थिएटरसम्मका दर्शक माझ उत्तिकै लोकप्रिय हुन्छन् । जबरजस्त फ्यान फलोइङ पाएका सलमानलाई खासगरी युवतीहरूले अधिक चाहन्छन् । अहिलेसम्म अविवाहित हुनु र उत्तिकै ह्यान्डसम भइरहनुले पनि युवतीको नजरमा अन्य अभिनेताको तुलनामा सलमान माथि छन् ।
सलमान ‘मैनें प्यार किया’ बाट जबरजस्त सफलता पाएर पनि ६ महिना कामविहीन भएका थिए । पछि उनले पछि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । कुनै बेला ‘लभर ब्वाई’ को भूमिकामा बढी देखिएका सलमान कमेडी भूमिकामा पनि खेले । तर उनलाई फ्यानले बढी मात्रामा दबंग शैलीमै रुचाए ।
‘दबंग’ र ‘टाइगर’ सिरिजले सलमानका फ्यान ह्वात्तै बढे । यस्ता फिल्ममा अभिनयले भन्दा पनि शक्तिशाली र रिसाह देखिएको रूप बढी चल्ने भएकाले सलमानका लागि उपयुक्त बन्यो । अभिनय नै देखाउनुपर्ने ‘ट्युबलाइट’, ‘वीर’, ‘जय हो’ जस्ता फिल्म खेल्दा उनी चिप्लिएका थिए । उनलाई फ्यानले ‘लार्जर द्यान लाइफ’ चरित्रमा नै हेर्न रुचाउने गर्छन् ।
सलमान त्यस्ता सुपरस्टार हुन्, जसका फिल्मले सुरुमै धुमधडाका व्यापार गरिदिन्छ । पछिल्लो फिल्म ‘भारत’ ले त एकै दिन साढे ४२ करोड भारु कमाइको कीर्तिमान नै राखिदियो । फ्लप भनिएका उनका ‘जय हो’, ‘ट्युबलाइट’ ले पनि सय करोड माथिको व्यापार गरेका थिए । त्यसो त सलमानका फिल्मले रिलिजअघि नै आफ्नो लगानी सुरक्षित गरिसकेका हुन्छन् । पछिल्लो पटक स्याटेलाइट राइट्समा पनि सलमान सबैभन्दा अघि छन् । एक टीभी कम्पनीले उनका चार फिल्मका लागि मात्रै चार करोड भारु तिरेर स्याटेलाइट राइट्स किनेको थियो ।
शाहरूख र आमिरभन्दा अलग
बलिउडमा शाहरूख र आमिरको प्रभाव पनि उत्तिकै छ । खासगरी शाहरूख लभर ब्वाईको भूमिकामा खुबै जम्छन् र त्यस्तै खालका फ्यान कमाएका छन् । आमिर भने उत्कृष्ट फिल्म खेलेर उपल्लो वर्गका दर्शकलाई आफूतर्फ तानिरहेका छन् । यस्तोमा सलमानले बीचको बाटो अपनाएका छन्, ‘मास हिरो’ बनेर ।
सलमान उडन्ते भूमिकामा समेत आफूलाई फिट बनाउँछन्, हिट देखिने चरित्र रोज्छन् र फिल्ममा ताली र सिट्ठी बज्ने इन्ट्री मार्छन् । कतिपय त सलमान र आमिरलाई क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर र वीरेन्द्र सेहवागसँग पनि तुलना गर्छन् । सचिन टेक्निकल्ली ब्याटिङ गर्नेमा चिनिन्छन् भने सेहवाग निडर भई खेल्छन् र विस्फोटक ब्याटिङ गर्छन् । रेकर्ड सचिनको बन्छ तर मनोरञ्जन सेहवागले गराउँछन् । त्यसैले सलमान सेहवाग हुन् भन्ने धेरै छन् । त्यसबाहेक उनी बिग बोसको होस्ट बनेर टीभीमार्फत दर्शकको घरघरसम्म पनि पुगेका छन् । यसले उनको फ्यान सर्कल निकै बढाइदिएको छ ।
सलमानका सर्वाधिक कमाउने दस फिल्म
टाइगर जिन्दा है (२०१७) भारु ३३९.१६ करोड
बजरंगी भाइजान (२०१५) भारु ३२०.३४ करोड
सुल्तान (२०१६) भारु ३००.६७ करोड
किक (२०१४) भारु २३१.६३ करोड
प्रेम रतन धन पायो (२०१५) भारु २१०.१६ करोड
एक था टाइगर (२०१२) भारु १९८.७८ करोड
रेस ३ (२०१८) भारु १६६.४० करोड
दबंग २ (२०१२) भारु १५५ करोड
बडिगार्ड (२०११) भारु १४८.८३ करोड
दबंग (२०१०) भारु १३८.८८ करोड
ट्युबलाइट (२०१७) भारु १२३.८० करोड
रेडी (२०११) भारु ११९.७८ करोड
जय हो (२०१४) भारु ११६ करोड